Netflix နဲ့အသစ်ကစီးရီး၏ဖန်တီးမှုဒါဝိဒ် Benioff နှင့်ဒန် Weiss နှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "Netflix နဲ့အသစ်ကစီးရီး၏ဖန်တီးမှုဒါဝိဒ် Benioff နှင့်ဒန် Weiss နှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်
HBO များအတွက် Thrones ၏ရုပ်သံစီးရီးဂိမ်း၏ဖန်တီးသူ Netflix နဲ့ 200 သန်းဆန့်ကျင်အမေရိကန်ပလက်ဖောင်း join ။
, Thrones စီးရီး၏ဝတ္ထုဂိမ်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-action ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်အငြင်းပွားဖွယ်နိဂုံးချုပ်, ဒါမှမဟုတ်သံ၏ပလ္လင်နေသော်လည်း ဒါဝိဒ်သည် Benioff (အဆိုပါ 25th နာရီ, သူခိုးများ၏စီးတီး, X-Men Origins: Wolverine, Troy) နှင့် ဒန် Weiss (ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, Halo, Ender ရဲ့ဂိမ်းငါဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအ Am, သူတို့ကတိုက်ရိုက်လွှင့်) စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုမ္ပဏီအများအပြားအားဖြင့်ကြီးမြတ်ဝယ်လိုအားနေဆဲဖြစ်သည်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာများယခုဒစ္စနေးများအတွက်အသစ်က Star Wars trilogy ပာရေးသားခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတယ်ဆိုရင်, Netflix နဲ့ မနည်းသန်း 200 ထက်အဘို့မမျှော်လင့်ဘဲသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် တစ်ဦးသီးသန့် Multi-တစ်နှစ်စာချုပ်နှင့်အတူ.
ဒါဝိဒ်သည် Benioff နှင့်ဒန် Weiss Netflix မှာဆိုက်ရောက်
အခုတော့ Netflix နှင့်အတူဆက်နွယ်, လူနှစ်ယောက်ဒစ္စနေးနှင့် Apple TV ကို + ၏အပြိုင်မူရင်းစီးရီးနှင့်အတူနာမည်ကျော်ဗီဒီယို On-demand ကြေးပေးသွင်းများ၏ကက်တလောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ showrunners ဒါဝိဒ်သည် Benioff နှင့်ဒန် Weiss "သိသာတဲ့အသစ်စိန်ခေါ်မှုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ကျနော်တို့ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက် HBO နှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောစွန့်စားမှုနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့အဲဒီမှာလူတိုင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ မကြာသေးမီလများတွင်ကျွန်တော် Cindy ဟော်လန်နှင့်ပေတရု Friedlander အဖြစ် Ted Sarandos နှင့် Scott Stuber နှင့်အတူစကားပြောအများအပြားနာရီကုန်ရပြီ။ ကျနော်တို့ 1980 နှစ်ပေါင်းရုပ်ရှင်များအတွက်တူညီအမှတ်တရများ share ကျနော်တို့အတူတူစာအုပ်တွေကိုချစ်ပြီးကျနော်တို့ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏တူညီသောဖြစ်နိုင်ခြေအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ Netflix နဲ့အံ့သြဖွယ်များနှင့်မကြုံစဖူးတစ်ခုခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်, ကြှနျုပျတို့ join ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဖို့ဂုဏ်ယူနေကြသည်။"
Ted Sarandos, အကြောင်းအရာ၏ဒါရိုက်တာ "ကရှင်းပြသည်အဖြစ် Netflix နဲ့အတူတူစိတ်အားထက်သန်မျှဝေဟုမရှိဘဲဒါဟာဝင်ကျနော်တို့ကြီးမြတ်ဇာတ်လမ်းတွေကို Netflix မှာဒါဝိဒ်သည် Benioff နှင့်ဒန် Weiss ကြိုဆိုဝမ်းသာကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးအထင်ကြီးဖန်တီးမှုအင်အားသုံးဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ Epic နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝမ်းသာပရိသတ်တွေရှိသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းသွင်းသူယူဆောင်လာလတံ့သောအရာကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။"
အဆိုပါဂျင်မီ Kimmel Live Show စဉ်အတွင်းဒါဝိဒ်သည် Benioff နှင့်ဒန် Weiss နှင့်အတူအင်တာဗျူး!
Dolemite ငါ့နာမ Is: Netflix ဟာအဘို့အ Eddie Murphy က blaxploitation အစွန်းရောက်ပုံ
အဆိုပါ Witcher: Rivia ၏ကလေးသည် Geralt အဆိုပါ Netflix ဟာစီးရီးအတွက်ခြေရာခံလိမ့်မည်
အဆိုပါသရဖူ: ရာသီများအတွက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ 3
ကောလိပ်ကျောင်း Hillsborough ဆန့်ကျင် Snapchat ခြိမ်းခြောက်ဖမ်းဆီးဟောင်းတစ်ဦးက 12 တစ်နှစ် - ဗွီဒီယို
ဗေဒင်: အသက်အရွယ်နှင့်အတူမခံနိုင်သောဖြစ်လာကြောင်း3ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG
ကင်မရွန်း: အလွန်အမျက် ထွက်. , ဆမ် Severine Ango "bedridden" ကိုနိုငျငံတျောသမ်မ Biya ငျြးပွညျ့မီ
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,252
TECH & Telecom1,613